Iindaba zeMoya eLwandle
Kuphi na Ghosts
Kukho iintlobo ezininzi zeenqanawa zomoya ezihamba ngezilwandle: iinqanawa ze-phantom ezibonakala emva kokucima, iinqanawa eziye zagqitywa ngokugqithiseleyo, iinqanawa ezitshabalalisa, kwaye ngaphezulu.
I-Flying Dutchman ayinakuzaza into eyaziwa kuzo zonke iinqanawa zenyama. Nangona amaninzi amabali ayo ayingqungquthela, isekelwe kwinyani - inqanawa egcinwe nguHendrick Vanderdecken, owahamba ngomkhumbi ngo-1680 esuka e-Amsterdam waya eBatavia, ichweba e-Dutch East India. Ngokomgca, iinqanawa zaseVanderdecken zidibene nesiphepho esinzima njengoko kuqhutywe iCape of Good Hope. UVanderdecken wayigatya ingozi yesiqhwithi-esicatshulwa ngabadlali ukuba babe sisilumkiso esivela kuThixo-kwaye baxineke. Ukuxhatshazwa yiqhwithi, umkhombe wawusungula, uthumele yonke indawo ekufeni kwabo. Njengesijeziso, bathi, iVanderdecken kunye nomkhombe wakhe wayeza kuhlaselwa amanzi ekufutshane neKapa ngonaphakade.
Yintoni eye yaqhubela phambili le ngongoma yothando kukuba abantu abaninzi bathi babona i -Flying Dutchman- ukuya kwekhulu lama-20. Enye yeemiboniso zokuqala ezazibhalwe ngumphathi kunye nabasebenzi beenqanawa zaseBrithani ngo-1835. Babhalela ukuba babona iinqanawa ze-phantom zisondela kwisigubungelo esiqhwithi. Kwafika kakhulu kangangokuba abasebenzi baseBrithani babesaba ukuba iinqanawa zombini zinokuthi zidibene, kodwa emva koko iinqanawa zenyama zaphela.
UFlying Dutchman waphinde wabonwa ngabadlali ababini be- HMS Bacchante ngo-1881. Ngomhla olandelayo, enye yala madoda yawa e-rigging yaza yafa. Ngoku kutshanje ngo-Matshi, ngo-1939, iinqanawa zomoya zabonakala kummandla wonxweme waseMzantsi Afrika ngamaninzi abathintelayo abanikezela inkcazo ecacileyo yesi nqanawa, nangona ininzi yayingazange ibone umthengisi wekhulu le-17. I-British South Africa Yonyaka ka-1939 yayiquka ibali, elivela kwiingxelo zepapasho: "Ngomnqophiso ongaqhelekanga, le nqanawa yahamba ngokunyuka njengoko iGlencairn beachfolk yayimi ngokuxubusha ngokucacileyo ukuba kutheni iinjongo kunye neendawo ezihamba ngayo. Nangona kunjalo, umkhumbi wemfihlakalo wawushenxiswa ngokukrakra njengoko wawufikile. "
Ukugqibela okuqoshiwe kwakubonwe ngo-1942 ukusuka kummandla weKapa. Amangqina amane wabona uMdatshi ehamba eThebula Bay ... aze aphele.
IMikhumbi yamaMoya eLwandle oluLwandle
IiLwandle eziMkhulu azikho ngaphandle kweenqwelo zaso.
Owaziwayo u- Edmund Fitzgerald (ochazwe ngasentla), umqhubi we-ore owagodla eLake Superior ngoNovemba 10, 1975 waphulukana nabasebenzi bayo abangama-26, wabonwa ngumkhumbi wezorhwebo iminyaka engama-10 kamva.
NgoSeptemba ka-1678, iGriffon yasuka eLake Michigan eGreen Bay ... yaphela. Sekunjalo kwiminyaka elandelayo, abahamba ngeenqanawa bathi babone iGriffon ehamba elwandle.
Uhambo lokuzonwabisa olunzulu lweLake Superior ngo-1988 lwafika kwi-Wreckage ye- Emperor ye-steamer. Ukubhukuda ngaphakathi kwidala elidala, udibaniso ufungela ukuba wabona isidumbu somntu olala phantsi ebhitshini ophendukile wamjonga.
Ubuso kwiManzi - i-SS Watertown
Ubuso bomoya we-SS Watertown.
UJames Courtney noMichael Meehan, amalungu e- SS Watertown , ahlambulula itanki yezinto zokuthengisa i-oil tanker njengoko yayidlulela kwiCanama Canal yaseNew York City ngoDisemba ka-1924. Ngengozi enkulu, la madoda mabini anqotshwa yi-gas ukutshaya kunye nokubulawa. Njengoko kwakungumkhuba wexesha, oomkhumbi bamngcwaba elwandle. Kodwa oku akuzange kube ngowokugqibela amalungu asele asebenzayo aya kubona abo bahamba ngeenqwelo.
Ngomso olandelayo, kwaye emva kweentsuku ezimbalwa emva koko, ubuso obunjengama-phantom boomkhombe babonwa emanzini alandela umkhumbi. Le ngxelo ingaba lula ukuyichitha njengengcamango ye-maritime ukuba kwakungekho ebungqina bobugcisa. Xa umphathi we nqanawa, uKeith Tracy, uxela iziganeko ezingaqhelekanga kubaqeshi bakhe, iCities Services Company, bacebisa ukuba azame ukufotoza ubuso obusondeleyo-oko akwenzayo. Enye yalezo zithombe iboniswa apha.
Qaphela: Lesi sithombe sinokungqina ukuba siyingxaki. UBlake Smith ubhale uhlalutyo olunzulu nophando lwesithombe se- ForteanTimes . Funda apha.
SS Intaba yeNtaba kunye noMlambo Wokufa
SS Intaba yentsimbi.
Kuyaqondakala ukuba iinqanawa zinokulahleka njani kwiindawo ezilwandle, ezinzulu, ezinzulu, kodwa iinqanawa zinokuphelelwa njani ngaphandle komlambo? NgoJuni, ngo-1872, i- SS Intaba ye-Iron yanyuka eVicksburg, eMisissippi ene-cargo ye-cotton ye-cotton yebheyile kunye nemibhobho ye-milasses. Ukuqala uMlambo waseMississippi ukuya kwindawo ekugqibeleni kuyo ePittsburgh, loo nqanawa yayibuye ishenxise umgca weebhanji.
Kamva ngaloo mini, elinye i-steamship, i- Chief of Iroquois , yafumanisa ukuba i-barges ihamba ngokukhululeka. I-towline yayinqunywe. Iqela labaphathi be- Iroquois baqinisekisa i-barges kwaye balinda iNtaba ye- Iron ukuba ifike kwaye ibuye ibuye ibuye. Kodwa akuzange kwenzeke. Intaba yeNtsalane , okanye nayiphi na ilungu labasebenzi bayo, yabonwa kwakhona. Akukho mnye umonakalo wokuphazamiseka okanye nayiphi na ingcezu yomthwalo wayo oye wanyuka okanye wanyuka waya elunxwemeni. Kwaphela kwaphela.
Enye yezona ndawo zidumileyo kwiinqanawa zokuhamba, uMariya uMariya - ngoku ihotele kunye nomtsalane wezokhenketho - kuthiwa ubambelele kwiintlobo ezininzi . Omnye unokuba ngumoya kaJohn Pedder, owayeneminyaka eli-17 ubudala owayesetyenziselwa ukubulawa ngumnyango ongenawo amanzi ngo-1966 ngexesha lokuqhuma. Ukungqongqoza okungacaci kuye kwavezwa kulo mnyango, kwaye isikhokelo sokutyelela sichaza ukuba sibone umnyama ogqoke umnyama njengoko wayehamba kuloo ndawo apho uPedder wayebulewe khona. Wabona ubuso bakhe waza waqonda ukuba nguPedder kwiifoto zakhe.
Ibhinqa elingummangaliso elimhlophe liye labonwa kufuphi nedeski yangaphambili. Ngokuqhelekileyo, uyaphela emva kwesosika kwaye akavumi. Esinye isidalwa, egqoke i-overalls-gray gourds and sporting a ndebvu ende, ibonakale kwi-shaft alley yegumbi leenjini. Amazwi omoya kunye nokuhleka kuye kwavezwa ngodonga lokubhukuda. Omnye umsebenzi wabona iinyawo ezimanzi zomntwana ezibonakala kwindawo yokubhukuda ... kungekho namnye apho.
I-Admiral Sir George Tryon.
NgoJuni 22, ngo-1899, ngo-3: 34 ntambama, iRoyal Navy yase- Victoria yaseVictoria yayinomnye umkhombe. Ininzi yabasebenzi babulawa, kubandakanywa nomlawuli walo, u-Admiral Sir George Tryon. Ingozi, iingxelo ezalandelayo zenziwe, zenziwa yimilaphu ephosakeleyo nguSir George.
Njengoko iinqanawa zacwina, wayevakala ngabantu abasindileyo ukuba bathi, "Yonke into ephosakeleyo." Ngomzuzu wengozi eyingozi, umfazi kaSir George wayebamba iqela ekhaya lakhe eLondon. Kungekudala emva kwe-3: 30 ntambama, iindwendwe ezininzi zafunga ukuba zibonwe uphawu oluphawulekayo lwe-Sir George ukuhamba ngaphaya kwendawo yokudweba.
UMoya weMpuma Omkhulu
IMpuma Enkulu yiTitanic yosuku lwayo. Eyakhelwe ngo-1857, kwiitoni eziyi-100 000 yayingamaxesha amathandathu kunomnye umkhombe owakhe wakha kwaye, njengesiTitanic, yayibonakala ibe yintlekele. Xa abakhi bayo bezama ukuyiqalisa ngoJanuwari 30, 1858, kwakunzima kangangokuba kwagxotha indlela yokuqalisa kwaye yayeka ukufa. Nangona ekugqibeleni ekugqibeleni ibeke indawo, yahlala kwindawo yokuhlala malunga nonyaka kuba imali yayiphelile ukuyigqiba.
IMpuma Enkulu yathengwa yiNkampani enkulu yeShiphu, eyayigqiba kwaye yayifaka elwandle. Kodwa ngexesha lovavanyo lwamazi, ukuqhuma okukhulu kwendiza kwabulala ubuncinane umntu omnye waza wanyuka ngamanzi athile ngamanzi abilayo. Enye inyanga kamva, umakhi wayo, u-Isambard uBrunel uBukumkani, wafa ngesifo. Naphezu kobukhulu bayo, iinqanawa eziqalekisiwe zazingaluthandi ngokupheleleyo abagibeli, kungekhona kwindwendwe yayo. Ngoluhambo lwakhe lwesine, lonakaliswe kakhulu kwisiqhwithi, kubangela ukulungiswa kweendleko.
Ngomnyaka we-1862, ngelixa liphethe inani lokurekhoda kwabagibeli - i-1,500 - yahamba ngommandla ongatshatyalaliswayo kwaye yaqhekeka ivule ngaphantsi kwayo ... igcinwe ukusuka ekucwileni kuphela ngokuphindwe kabini. Ngezihlandlo eziliqela, ingxolo engaqhelekanga yomsindo ongaziwa ingavavanywa ngaphantsi kweekhonkco. I-crew yathi iyakunzwakala nangaphezulu kwesaqhwithi somoya kwaye ngamanye amaxesha bahamba ngomkhumbi.
Le nqanawa yaqhubeka ilahlekelwa yimali kubanikazi bayo, kodwa yayiphumelele ekuncediseni ikhebula le-transatlantic ngo-1865. Iinqanawa ezingcono ezakhelwe injongo ziza kutshintsha indawo yeMpuma Omkhulu , nangona kunjalo, kwaye iminyaka engama-12 yahlala ingqungquthela de ibe ekugqibeleni ithengiswa ngempahla isinyithi. Njengoko kwakucatshulwa, umthombo wenhlanhla enqanawa yeso nqanawa, mhlawumbi (kunye ne-phantom hammering), yafunyaniswa: ngaphakathi kwinqwelo ephindwe kabini yayisisigxina se-shipwright esasiye sazimela ngokukhawuleza ngexesha lokwakha.
UMariya Celeste - Umkhumbi owazityhila
Ingqungquthela kaMariya Celeste ingaba yinqaku ngokwayo, njengokuba yenye yezona ziwayo zidumileyo, ezithakazelisayo kwaye zingenakucingwa. Ngomhla kaDisemba 3, 1872, abasebenzi beDe Gratia , besuka eNew York baya eGibraltar, bafumana uMariya Celeste ejikelezayo engamelanga malunga neekhilomitha ezingama-600 entshonalanga yePortugal.
Le nqanawa yayisesimo esiphelele. Kwakhiwe iileyile, imithwalo yayo eyi-1,700 yeerhwebo yotywala yayingabonwa (ngaphandle kombhobho omnye, owavulekileyo), isidlo sakusasa sasibonakala ngathi sishiywe phakathi kokudliwa, kwaye yonke impahla yabasebenzi ukhwelile. Sekunjalo umphathi wayo, uBenjamin S. Briggs, umfazi wakhe, intombi yakhe, kunye nabasebenzi beenqanawa bee sixhenxe babesekho.
Ezinye iinguqu zamabali zithi ibhodi lokuphila elithengiswa yinqanawa lalingekho, ngelixa abanye bathi bekusekhona kwindawo. Yonke into eyayibonakala ilahlekile yayiyi-chronometer yesikhephe, i-sextant, kunye namaxwebhu eempahla. Kwakungabikho mqondiso womzabalazo, ubundlobongela, isiqhwithi, okanye nawuphi na uhlobo lophazamiseko. Ukungena kokugqibela kwirekhodi yomkhumbi kwenziwe ngoNovemba 24, kwaye akuzange kubonakalise nayiphi na ingxaki.
Ukuba le nqanawa yayishiyiwe kungekudala emva kokungeniswa kwalo, uMary Celeste wayeya kuba neveki kunye nesiqingatha. Kodwa oku kwakungenakwenzeka, ngokubhekiselele kubasebenzi beDe Gratia , ngokuqwalasela indawo yekhefu kunye nendlela eyahamba ngayo. Omnye umntu-okanye into-kufuneka ukuba wasebenza le nqanawa ubuncinane iintsuku emva kokungena kokungena kokugqibela. Ingozi yabasebenzi bakaMariya Celeste ihlala ingummangaliso.
I-Amazon - I-Sursed Ship
Ezinye iinqanawa zibonakala ziqalekisiwe ngenhlanhla. I- Amazon yachithwa ngo-1861 eSpencer Island, eNova Scotia , kwaye emva kweeyure ezingama-48 emva kokuthatha umyalelo wenqanawa, umphathi wayo wafa ngokukhawuleza. Kwihambo lwayo intombi, ama- Amazon ahlasela ukuloba (intambo), eshiya i-gash kwindawo yayo. Ngelixa lilungiswa, iinqanawa zavutha umlilo owaphuphuma ebhodini. Kungekudala emva kwexesha le-Atlantic, i- Amazon yahamba kunye nezinye iinqanawa.
Ekugqibeleni, ngowe-1867, inqanawa engafanelekiyo yachithwa kwinqanawa yaseNewfoundland ize ishiywe kubahlali. Kodwa inqanawa yayinomnye wokugqibela nomhla wokugqibela. Kwaphakanyiswa kwaye kubuyiselwa yinkampani yaseMerika eyayihamba ngomkhumbi ngezantsi. Yathengwa ngowe-1872 nguCaptain Benjamin S. Briggs owaphakamisa iinqanawa zakhe waza waya elwandle waya eMeditera kunye nentsapho yakhe ... ngoku nje isi nqanawa saqanjwa ngokuthi nguMary Celeste !
NgoJuni, ngo-1947, iinqanawa ezininzi kwiinkathazo zaseMalacca ngaseSumatra zithatha i-SOS eyayifaka umyalezo othi, "Bonke abaphathi kuquka umphathi bafile belele kwindawo yokutshata kunye nebhuloho. umthumeli ofunda ngokulula, "Ndiya kufa."
Iinqanawa ezimbini zaseMerika zathengisa umyalezo, owaziwayo ovela kwi- Ourang Medan , umqhubi waseDutch. Umntu osondeleyo kwinqanawa ephazamisayo yayinguSilivali yeSiliva , eyayihamba ngamandla amakhulu ngokuthemba inqanawa. Ekufikeni kwabo, abasebenzi bazama ukubonakalisa kwaye baqhagamshelane ne- Ourang Medan , kodwa akukho mpendulo.
Emva kokukhwela inqanawa, abasebenzi beSilivali yeSilivali bafumana ukuthungula nokumangalisa : wonke umntu owayeya kwi- Ourang Medan wayesefile , kuquka umphathi wesikhuloli, amagosa evili, ukuya ku-crewman othumele isigidimi sokubandezeleka , ngesandla sakhe kusekho kwi-Morse Code engenawucingo.
Yonke ilungu labaqeqeshi belifile, amehlo abo avulekileyo kunye nemilomo yabo i-agape, njengokungathi babone ubungqina obungabonakaliyo ngaphambi kokufa kwabo. Akukho nto ebangela ukuba bafe. Bafe njani? AmaPirates ayedlululwa ngenxa yokuba akukho namnye amabhodi abonisa nayiphi na imiqondiso yamanxeba okanye ukulimala. Kwakungekho ligazi.
I- Silver Star yagqiba into yokuba yenzelwe ukuyibuyisela i- Ourang Medan kwi-port apho imfihlelo yayiyakucwangciswa khona. Ngaphambi kokuba bangashiye kuloo ndawo, ke, umsi waqala ukuphuma ngaphantsi kwe- Ourang Medan ilandelwe ukuqhuma okukhulu okwakubhuqa umkhumbi waza wawuthumela ngokukhawuleza elwandle.
Ngokuqinisekileyo oko kwabulala abasebenzi be- Ourang Medan kusalulazi. Enye into enokwenzeka ukuba i-crew iyanqotshwa yi-gesi ye-methan ekhuphuka emanzini angaselunxwemeni kwaye ikhuphe iinqanawa. Iingcamango ezingamangalisa ezithi zivela ngaphandle. Kwimeko nayiphi na into, ukufa kwa- Ourang Medan akuzange kusichazwe ngokucacileyo-kwaye mhlawumbi kungeke kwenzeke.
SS Bay isono
SS Bay isono.
Isiphumo se- SS Bay sinye yeyona nto ibalulekileyo kunayo yonke into ebhalwe kuyo. Ihamba ngeenqwelo-moya - engama-38 iminyaka!
Eyakhelwe eSweden ngowe-1911, umkhombe womkhuhlane wawuqala ukukhishwa njenge- Ångermanelfven yenkampani yokuthumela iJamani kwaye yasebenza njengetyitrhwe phakathi kweHarbourg neJamani kwaze kwafika iMfazwe Yehlabathi I. Emva kwemfazwe inqanawa yanikelwa eBrithani enkulu ekubuyiselweni kwemfazwe kwaye yaqanjwa ngokuthi iBay sin .
Ngo-Oktobha, ngo-1931, kunye nomkhumbi we-furs, i- Bay sin yahlanganiswa kwi-ice pack eduze kwedolophu yaseBarrow, e-Alaska. Abasebenzi bashiya umkhombe ukuze uBharrow alinde ukuba iinqanawa zikhululeke ngokwaneleyo ukusuka kwiqhwa ukuze ziqhubekele indlela yazo. Xa abasebenzi bebuya, kodwa ke, iinqanawa sele ziqhelile ngaphandle kwaye zihamba. Ngomhla we-15 kuOktobha, waphinde wagxinwa kwiqhwa. Abanye babasebenzi benza isigqibo sokulinda kuloo ndawo de bawukhusele umkhombe, kodwa ngexesha le-blizzard ngoNovemba 24, i- Bay isono yanyamalala .
Ekuqaleni abanini bekholelwa ukuba iinqanawa kufuneka zitshitshise kwisiqhwithi, kodwa umzingeli wecala lomdaka wachaza ukukubona malunga neekhilomitha ezingama-45 ukusuka apho wahlala khona e-ice. Abasebenzi bafumanisa iinqanawa, basusa oko bafuna ukukwenza, bashiya iinqanawa, bakholelwa ukuba kwakungeyonto efanelekileyo ukuba basinde ebusika.
Kodwa i- SS Bay sin yaphila. Kwiminyaka emininzi elandelayo iinqanawa zabonwa kwaye zaza zafika ezinye iinqanawa zafumana iinqanawa. Ngexesha ngalinye, nangona kunjalo, abazange bakwazi ukukrazula iinqanawa eziqalekisiwe ukuba baqhube okanye baphoqelelwe ngaphandle kwemozulu embi. Ukuboniswa kubandakanya:
Ngowe-1932 - ubonwe yinja edwengula endleleni eya eNome, eAlaska
Ngowe-1933 - behamba ngamanye ama-Inuit (ama-Eskimos) abanjwe ngqhwithi ngeentsuku ezili-10
Ngowe-1934 - ehamba ngumbutho we-schooner ohlolisayo, owayeka kuwuyeka
Ngowe-1939 - ehamba ngeCaptain Hugh Polson, naye wayeka ukuyiyeka ngenxa yokwakha iqhwa
Ngowe-1962 - yabonwa ngokusuka kwiLwandle lwaseBeaufort nge-Inuit
Ngowe-1969 - wafunyanwa kwakhona efriziwe epakethe ye-ice-yokugqibela ye-Bay sin
Ngenxa yokuba ingazange ibonwe ukususela ngo-1969, kucingelwa ukuba i- Bay sinokugubha , nangona kungekho nto ifunyenwe ngayo. Ngubani owaziyo? Inqanawa ye-phantom ingaphinda iphinde ihambe ngomkhumbi we-Arctic amanzi.
Xa ama-Ghosts Attack
Ukuxhatshazwa ngumfana ofile
Abantu be-Shadow: Ziziphi na?
Iintlanganiso zeMoya - Iindaba eziNyaniso - Icandelo 3
I-Krismesi edibeneyo: i-Yuletide Tales of Ghosts kunye ne-Hauntings
Yeka indlela iqela loPhando lwezengqondo elazisa uMoya "Ubomi"
Ngaba Imisebenzi Yokwenene Yomsebenzi? Oko ifilimu ikunene
Yiyiphi Inkohlakalo engabonakaliyo okanye umsi?
Kutheni i-Ghosts ibonakala igqoke izambatho?
Iimfundiso Zakho Zokwenyaniso kunye neengxelo zeParanormal
Ngaba Amathunya Amathathu Angamangalisa Ngaphambili Ukufa?
Abangewona amalungu eManyeneyo
Funda iNcazelo kunye nenjongo yeBolt Reverse-Thread
Abaculi abachaphazelekayo abafa ngoLutsha
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uLafayette McLaws
Yiyiphi iCandelo loQeqesho loKwakha lo-21?
Iimpawu zeMphefumlo ze-2016 iNew Orleans Jazz & Heritage Festival
Ama-Sikh Ama-Hymns enikela isikhuthazo kumaxesha amanzima iDokok Santaap Na Lagee
Ghost in the Shell Image Gallery
2015 Iingoma eziphezulu zeMetric heavy
Abomculo abaMnyama abaziwayo
Inyoka Yenzani Yasebenza?
Iingoma ezi-Top Ten Worst Disco Zonke zexesha
Ngo-2016 Umvuzo weNobel kwiKhemistry - iMishini yamathambo
I-Kasco Golf: Ulwazi lweenkampani, iiKlabhu zayo kunye naphi na ukuzifumana
Ukwahlukana phakathi kweZikolo i-Ars Antiqua kunye no-Ars Nova
Inyaniso Ngomntu oPhakamileyo
UKumkani uEgbert waseWessex
Indlela Ukuthabatha Iifomthi Zakho Zisebenza - Kutheni Ama-Joints Pop and Crack
Ukudibanisa amatyala kwiKhadi leMatyala-Isikhokelo sabaFundi
Amazwi Aya Kukunceda Ukholelwe Othandweni
Ukudibanisa Imibala: Okufuneka Ukwazi Ngezicatshulwa, Iimpawu kunye neeShades
SLEIN Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho